Somaaliya oo labo ciyaaryahan u dirtay Cayaaraha Tokyo | KEYDMEDIA ONLINE
Somaaliya oo labo ciyaaryahan u dirtay Cayaaraha Tokyo
Iidow wuxuu tartankaan kula biirayaa feeryahankii ugu horreeyay ee Olombikada ku matala Soomaaliya, Ramla Cali, oo ku tababartay London, dhawaanna gaartay Tokyo.
Tokyo, japan - Kooxda Olombikada Soomaaliyeed ayaa Jimcihii si rasmi ah ugu amba baxay Ciyaaraha Tokyo, kadib markii Madaxweynaha mudadu ka dhamaatay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sagootin ugu sameeyay Madaxtooyada.
Madaxa gobolka iyo saraakiisha sarsare ee isboortiga ayaa ku booriyay kooxda inay si kalsooni leh u tartamaan iyagoo waliba si sharaf leh u lulaya calanka Soomaaliya.
Orodyahanka masaafada dhexe Cali Iidow ayaa ka qayb gali doona orodka 800 ee mitir kadib markii uu laba sano tababar adag la qaadanayay ciyaartooy xirfadlayaal ah sida; Mo Farah oo reer Britain ah iyo Ayaanle Suleymaan oo reer Jabuuti ah oo ku sugnaa buuraleyda sare ee Itoobiya.
Maxamed Cabdow Xaaji, madaxa guddiga Olombikada Soomaaliyeed, ayaa sheegay in sanadkan uu ka duwan yahay kuwii hore, isla markaana uu ku faraxsan yahay in Cali oo xirfad sare leh la xushay, halka uu xusay in guddigu isku dayayo inuu tababaro ciyaartoy kale oo ka baxsan orodka fog iyo midka dhexe, taas oo caan ka ah waddamada Geeska Afrika.
Wasiirka Isboortiga Xamza Siciid Xamza, ayaa sheegay in dowladdu ay ka shaqeyneyso sidii loo casriyeyn lahaa xarumaha isboortiga Soomaaliya, sida garoomada lagu tababarto, si gacan looga geysto horumarinta natiijooyinka cayaartoyda.
Maxamed Daa’uud Maxamed iyo Maryam Nuux Muuse, ayaa dalka ku matalay cayaaraha oradka Olombikadii lagu qabtay Rio de Janeiro, Brazil, Agoosto, 2016.
Soomaaliya waligeed kuma guuleysan billad Olympics ah nooc kasta oo isboorti ah. Iidow iyo Ramla waxay rajaynayaan inay noqdaan kuwo lagu faano marka ay billowdaan Ciyaaraha 23-ka July.
QM oo soo dhawaysay tallaabo uu qaaday RW Rooble
Warar 26 July 2021 12:02
War-saxaafadeedka Qaradmada Midoobay lagu balan qaaday taageero la sii doono haweenka soomaaliyeed, si ay u helaan qoondadooda iyo xuquuqda ay ku yeelan doonaan Barlamaanka soo socda.
Waalidiinta oo dib u billaabay bannaan-baxyada
Warar 26 July 2021 11:04
Frmaajo iyo Fahad Yaasiin waa musiibo – Nabaddoon Xaad
Warar 26 July 2021 10:11
Muxuu RW Rooble kala hadlay madaxda maamul goboleedyada?
Warar 26 July 2021 8:26